भोट हाल्न नसिकाएको मतदाताको गुनासो – इन्सेक
बैतडी ०७४ जेठ २५ गते
करिब दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनै लाग्दा जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक खुसी भए पनि आफूले हालेको मत बदर हुने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका छन् ।
'यो चुनावमा मतपत्र ठूलो छ भन्ने सुनिएको छ । त्यसैले मत बदर भएर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।'-डिलाशैनी-१ का जानकी रानाले भनिन् । मतदान गर्ने विषयमा आजसम्म सिकाउन कोही नआएको उनले गुनासो गरिन् ।
'मतदान गर्ने तरिका सिकाउन कोही आएका छैनन् । कसरी मतदान गर्ने ? भन्ने थाहा नहुँदा अन्योल भएको छ ।'-उनले दाहोर्‍याईन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले भोट मात्रै माग्न आउने तर मतदान गर्ने तरिका बारेमा सिकाउने नगरेको स्थानीय उद्धवप्रसाद भट्टले आरोप लगाए । उनले भने-'ग्रामीण क्षेत्रका मतदातालाई मतदानका विषयमा जानकारी नगराए धेरै मत बदर हुने सम्भावना छ ।'
दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत हाल्न आतुर भएपनि मतदान कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको स्थानीय लक्ष्मी बोहराले गुनासो गरिन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले जेठ ५ गतेदेखि गाउँगाउँमा मतदाता शिक्षा स्वयम्सेवक खटाइसकेको जनाएको छ ।
१० वटा स्थानीय तह रहेको बैतडीमा ६५ हजार ९ सय ३२ जना महिला, ६२ हजार ८ सय जना पुरुष र एक जना तेश्रो लिङ्गी गरी जम्मा १ लाख २८ हजार ७ सय ८३ जना मतदाता छन् ।
मतदाताको घरदैलोमै गएर मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न १ सय ८७ जना मतदाता शिक्षा स्वयम्सेवकलाई परिचालन गरिएको भने पनि प्रभाव कमै रहेको स्थानीयको आरोप छ ।